Chiso ID inomira kushanda kana ukatsiva iyo iPhone 13 skrini neisina-chepakutanga imwe | IPhone nhau
Chiso ID inomira kushanda kana ukatsiva iyo iPhone 13 skrini neisina-yekutanga
Ignacio Sala | 27/09/2021 10:00 | Yakagadziridzwa ku 27/09/2021 11:10 | iPhone 13
Neimwe neimwe nyowani nyowani yekumisikidzwa kwe iPhone, chimwe cheanoshamisira icho vashandisi vazhinji vane iwo mutengo iwoyo isu tinofanirwa kubhadhara shanduko kuburikidza neApple kana vanobvumidzwa vatengesi, bhatiri, musana, skrini kana chimwe chinhu chechigadzirwa.
Apple yagara iri yakawanda kwazvo kana zvasvika pakuvhura ruoko iro vashandisi vanogona kusarudza pekugadzirisa zvigadzirwa zvavo, izvo zvinonzi kodzero yekugadzirisa. Iyo YouTube Foni Kugadzirisa Guru, yaburitsa dambudziko iri na chinja iyo iPhone 13 skrini neisina-yekutanga.
Kugadziridza Runhare Guru inoratidza muvhidhiyo nyowani semhinduro chete kana yako iPhone skrini ikatyoka iri enda kunzvimbo ine mvumo sezvo Chiso ID chicharega kushanda.
Kana maikorofoni, ambient light sensor, uye proximity sensor pane iyo iPhone 13 ichitsiva zvese zvinoshanda sezvaungatarisira. Asi kana iyo iPhone 13 skrini yatsiviwa neimwe nyowani, iyi ichaona kuti haisi skrini yekutanga uye Chiso ID inomira kushanda.
Yakakosha meseji yekuratidzira
Iyi iPhone haigone kuverengerwa kuva neyekutanga Apple skrini.
Foni Kugadzirisa Guru inotsanangura mhinduro yakapusa kuendesa mamwe machipisi kubva kuchidzitiro chekare kuenda kuchiratidziro chitsva, asi mazhinji ekugadzirisa zvitoro haadaro nekuti iri rakaoma kunzwisisa uye rinotora nguva kuita.
Apple yatotarisana nemakakatanwa mazhinji kana zvasvika kurudyi kwekugadzirisa uye izvi zvinongoita kuti zvinyanye kuomera varidzi vatsva veiyo iPhone 13 gadzirisa maPhones ako munzvimbo dzakasiyana neApple.
Kuti udzivise dambudziko iri, zviri nani kugara uchishandisa zvese zviri zviviri chekuchengetedza screen uye kesi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 13 » Chiso ID inomira kushanda kana ukatsiva iyo iPhone 13 skrini neisina-yekutanga
Chinhu chekutanga kusashandisa dziviriro, hachisi chekutenga chero chinhu kubva kuApple.
Ichi hachisi chinhu chitsva.
Nechekare yapfuura zvakaitika.
Kana iwe uchigadzirisa iyo skrini neisina kukodzera imwe kubva ku iPhone X uye zvichikwira, Face ID haishande KUSVIRA iwe uchinje ese machipisi ari mukamera, izvo zvakaoma kwazvo.
Chinhu chimwe chete ichocho chakaitika kwehupenyu hwese nekubata ID. Kana iwe ukachinja iyo skrini haina kushanda.
Kunze kwekunge iwe uchinja iwo maTouch ID machipisi.